သွေးသားမတော်ပေမယ့် (၇၅) နှစ်အရွယ်ရေခဲချောင်းသည် ကို တစ်သက်စာထောက်ပံ့ပေးတဲ့ စေတနာရှင် – Daily Feed MM
Admin_John | May 11, 2020 | Local News | No Comments
ပရိသတ်ကြီးရေ ကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် စားဝတ်နေရေးဟာ ခက်ခဲပါတယ်
ဒီလို ခက်ခဲတဲ့ အဘွားအိုတစ်ဦးကို ကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့လူရဲ့ စေတနာတရားကတော့ တကယ့်ကိုအံ့သြစရာမို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်…
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကို ရာသက်ပန် လှူဒါန်းမည့်အပြင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝကိုလည်းယနေ့ မေ ၇ ရက်၊ မွန်းလွဲ(၃)နာရီအချိန်မှစ၍ စေတနာသန့်သန့် စိတ်ရင်းစေတနာဖြင့် တာဝန်ယူ
ဒါကြောင့် စေတနာရှင် ဦးလေးအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားလေး ဆိုခဲ့ပါအုံးနော်..
Source ; ကိုဂျိမ်း(ဒလ)
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရွိတဲ့ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုေတြအတြက္ စားဝတ္ေနေရးဟာ ခက္ခဲပါတယ္
ဒီလို ခက္ခဲတဲ့ အဘြားအိုတစ္ဦးကို ကုသိုလ္ျပဳခဲ့တဲ့လူရဲ႕ ေစတနာတရားကေတာ့ တကယ့္ကိုအံ့ၾသစရာမို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္…
မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ားကို ရာသက္ပန္ လႉဒါန္းမည့္အျပင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝကိုလည္းယေန႔ ေမ ၇ ရက္၊ မြန္းလြဲ(၃)နာရီအခ်ိန္မွစ၍ ေစတနာသန႔္သန႔္ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ တာဝန္ယူ
ဒါေၾကာင့္ ေစတနာရွင္ ဦးေလးအတြက္ ဂုဏ္ျပဳစကားေလး ဆိုခဲ့ပါအုံးေနာ္..
Source ; ကိုဂ်ိမ္း(ဒလ)
နင်မြင်ရင် ကြွေသွားမယ်ဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး